XyBo: အေဘီ သွေးပိုင်ရှင် နှင့်လိုက်ဖက်မည့်သူ
အေဘီ သွေးပိုင်ရှင် နှင့်လိုက်ဖက်မည့်သူ
ရေးသားသူ - XyBo
ဒီနှစ်ယောက်သာ တွေ့ကြပြီဆိုရင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြီး တစ်ခုလုံးဟာ ခြောက်ကပ်သွားတော့တာပါပဲ။ စကားတွေအများကြီး လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ရပြီး အချင်းချင်း အပြိုင် ခေါင်းမာနေတတ်လို့ စိတ်အခန့်မသင့်မှုလေးတွေလည်း များတတ်ပါတယ်။ အေဘီသွေးပိုင်ရှင် ယောင်္ကျားများရဲ့ ထူးခြားချက်ကို နားမလည် နိုင်တာကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းရတဲ့ အတွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မေးတာကတခြား ဖြေတာက တခြား ဖြစ်တဲ့ အခါတွေလည်း များပါတယ်။ ဒီစုံတွဲလေးက ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အတွဲလေးလို့ ပြောလို့ မရနိုင်သလို လုံးဝ ပေါင်းစပ်လို့မရဘူးလို့လည်း ပြောလို့ မရပါဘူး။ အေသွေး မိန်းကလေးနဲ့ အေဘီသွေးယောင်္ကျားလေးတွေကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံးက သေချာပိရိတဲ့အပြင် အချင်းချင်းရဲ့ အားသာချက်လေးတွေကိုလည်း လက်ခံအသိအမှတ်ပြုတတ်ကြတာမို့ အဆင်ပြေတဲ့ အခြေအနေလေးကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အေသွေးမိန်းကလေးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စကား၊ ဟာသလေးတွေ ပြောတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကို သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။
အေဘီသွေးယောင်္ကျားလေးများရဲ့ ပညာရှိရှိပြုမူတတ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေက ဘီသွေးမိန်းကလေးများကို ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အေဘီသွေးယောင်္ကျားလေးများကလည်း ဘီသွေးမိန်းကလေးများရဲ့ စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ချင်စိတ်၊ တက်ကြွဖျတ်လတ်မှုကို နှစ်သက်ကြပါတယ်တဲ့။ ဘီသွေးမိန်းကလေးများက အေဘီသွေးယောင်္ကျားလေးများ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ချစ်ခွင့်ပန်တဲ့ ပုံစံမျိုးကို သဘောကြသလို ညင်းလည်း မညင်းနိုင်ပါဘူး။ ပွင်းလင်းတဲ့ စတိုင်လ်ကို လိုလားတာဟာ ဘီသွေးတွေရဲ့ စတိုင်လ်မို့ပါ။ ယောင်္ကျားလေးဘက်ကတော့ နည်းနည်း တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ အခါလေးတွေလည်း ရှိတတ်ကြပြီး ရင်ထဲမှာ ခံစားရတဲ့အတိုင်း ဖော်ပြတတ်ပေမယ့် ဘီသွေးမိန်းကလေးများရဲ့ ခံစားချက်ကို သိုဝှက်တတ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေကို နှစ်သက်ကြပါတယ်တဲ့။
အချင်းချင်း လုံးဝ စရိုက်သဘာဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာတောင်မှ တော်တော် လိုက်ဖက်ညီတဲ့ အတွဲလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူအဖြစ်အနေထက် အစ်ကိုတစ်ယောက်လို ခင်မင်တွယ်တာတာမျိုးက ပိုများပါတယ်။ အေဘီသွေး ယောင်္ကျားလေးများရဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ စရိုက်ဟာ အိုသွေးပိုင်ရှင်မိန်းကလေးများရဲ့ မျက်စိမှာတော့ တော်တော် ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတတ်ပါတယ်တဲ့။ အေးစက်ပြီး တရားကျကျ စဉ်းစားတတ်တဲ့ အေဘီသွေးပိုင်ရှင် ယောင်္ကျားလေးများကို အိုသွေးမိန်းကလေးများက တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ မှီခိုအားထားရာတစ်ခုလို့လည်း ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လိုက်ဖက်ညီမှုကတော့ ၃၀%ပါ။
အချင်းချင်း ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်တဲ့အပြင် တဘက်သားကိုလည်း အလေးအနက်ထားတတ်ကြပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ အတွဲလေးတစ်တွဲဖြစ်ပေမယ့် သူများတွေအမြင်မှာတော့ သိပ်ပြီး မထူးခြားလှတဲ့ အတွဲလေး တစ်တွဲပါ။ တပူးကပ်ကပ်နေတတ်တဲ့ အတွဲလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက စဉ်းစားဥာဏ်ရှိတဲ့အတွက် တဘက်သားရဲ့ စရိုက်သဘာဝတွေအားလုံးကို နားလည်ပေးနိုင်သလို မကြိုက်တဲ့ အပြုအမူကို ရှောင်ကျဉ်ကြပါတယ်။ တခါတလေမှာတော့ အတွေးအခေါ်တွေ မတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပေးအယူမျှတဲ့ အတွဲဖြစ်တာကြောင့် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အတွဲလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
This entry was posted on Monday, August 18, 2008 and is filed under လူ့စရိုက် . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
Filed under လူ့စရိုက်
ဟောတော့ နေ့အိပ်မက် စာသင်ရတာ အိုနဲ့ဘီကအတည့်ဆုံးတဲ့.. ဒီမှာကျ တစ်မျိုးပါလား
အေဘီ-အေ (၆၅%) လက်ခံတယ် အေသွေးကိုက ပျင်းစရာကြီး
အေဘီ-ဘီ (၉၀%)ဖြစ်နိုင်တယ်... ဒါပေမဲ့ သူတို့အတွဲက သိပ်မလွယ်ဘူး.. ပတ်ဝန်းကျင်ကအမြင်ကတ်မယ်နဲ့တူတယ်..
အေဘီ-အို (၃၀%)မှန်လောက်တယ်... အေဘီတွေက ခုတစ်မျိုးတော်ကြာတစ်မျိုးဟာကြီးကို
အေဘီ-အေဘီ (၉၀%)ရာနှုန်းကတော့ မှန်လောက်ပါတယ်.. အေဘီတွေ တစ်ဘက်သားကို အလေးအနက်ထားတယ်ဆိုတာတော့ သိပ်မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်.. သူတို့ကလုပ်ချင်တာလုပ်တတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလား
အို-အေ (၁၀၀%)မှားတယ်ရှင့်... လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတဲ့သူနဲ့ အလေးအနက်ထားတဲ့သူ ဘယ်လိုလုပ်တည့်မှာတုန်း
အို-ဘီ (၇၅%)အဲဒီအတွဲက ၁၀၀ရာနှုန်းအကောင်းဆုံးလို့ သင်ဖူးတယ်ရှင့်၊ အပြင်မှာလက်တွေ့လိုက်မှတ်ထားထာလည်း တော်တော်တည့်ကြတယ်..
အို-အို (၄၀%)သူတို့ကတော့ ဆရာလုပ်ရင်း ထသတ်နေကြမှာ
အို-အေဘီ (၉၅%)မိန်းကလေးက သိပ်ကြည်မှာမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်.. သူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်တော့လေ...
ဘီ-ဘီ (၆၅%)အင်း.. ဒါတော့မှန်တယ်...
ဘီ-အို (၈၀%)ဒီအတွဲလည်း မှန်ပါတယ်....။
ဘီ-အေ (၂၀%)ဒါလည်းမှန်တယ်.. သူတို့တွေတည့်မှာမဟုတ်ဘူး...
အေ-အေ (၇၀%)မှန်တယ်.. သူတို့တွေက တည့်ကြမှာ သေချာတယ်.. ဒါမဲ့ ပျင်းခြောက်ခြောက်ကြီး
အေ-ဘီ (၂၅%)သူတို့ကသတ်ရင်းပုတ်ရင်းနဲ့ ပြီးနေမှာနော်
အေ-အို (၉၀%)သိပ်တော့ မထောက်ခံချင်ဘူး... ကိုးဆယ်တော့ သိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်.. ခြောက်ဆယ် ခုနစ်ဆယ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိလောက်တယ်..
အေ-အေဘီ (၅၀%)ဒါတော့ ထောက်ခံတယ်..
နေ့အိပ်မက်လည်း သွေးအကြောင်းသင်ဖူးလို့.. ပြီးတော့ လက်တွေ့လည်းစမ်းဖူးလို့ လူ၁၀၀ကျော်လောက်ကိုပေါ့..။ အဲဒါကြောင့် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ဝေဖန်သွားတာပါ။ ကွဲလွဲမှုတွေရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့.... :)
name/url နဲ့မရလို့ anonymous နဲ့ပဲမန့်သွားလိုက်တယ်နော်..
psycho test (4)
၁၂နာရီကြာ Lemon Tea ၏ အစွမ်း
သင်ဘယ်လောက် အလုပ်လုပ်ချင်စိတ် ရှိလဲ
Copyright 2008 - XyBo - is proudly powered by Blogger